FETHULLAH GÉELEN MOVEMENT TIMELINE
1938 ma ọ bụ 1941 (Eprel 27): Fethullah Gülen mụrụ na obodo mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Erzurum, Turkey.
1946-1949: Gülen nwetara agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ elementrị na usoro agụmakwụkwọ gọọmentị na-achịkwa Turkey. Gülen agụghị akwụkwọ elementrị ya, mana o mechara gụchaa nha ahụ.
1951-1957: Gülen gụrụ akwụkwọ Islam n'okpuru ọkwa nke ọtụtụ ndị isi okpukpe okpukpe Hanafi na ndị isi obodo gụnyere nna ya, Ramiz Gülen , nakwa Haci Sikti Effendi, Sadi Effendi, na Osman Bektaş .
1957: Gülen nwere mmata mbụ ya na Turkey's Nur Movement (Nur Harekeeti, ya bụ, ndị na-eso ụzọ Said Nursi) yana Risal-i Nur Külliyatı (RNK, Epistles of Light Collection - nkuzi ndị a na-achịkọta nke Nursi).
1966: Gülen kwagara İzmir, Turkey ebe ọ rụrụ ọrụ dịka onye nkuzi okpukpe na Kestanepazarı Mosque dị ka onye ọrụ nke ndị isi oche nke okpukpe na Turkey (Diyanet).
1966-1971: Gülen ewu ewu malitere itolite, obodo nke ndị nwere mmasị na-eguzosi ike n'ihe pụtara.
1971 (March 12): Ntughari agha nke abuo nke Turkey kemgbe nguzobe nke Republic (1923) mere. E jidere Gülen maka ịbụ onye isi ebubo nke okpukpe okpukpe na-akwadoghị, yana agbanyeghị na ahapụ ya n'ime ụbọchị ole na ole, amachibidoro ya ikwu okwu n'ihu ọha.
1976: E guzobere ụlọ ọrụ GM abụọ mbụ - Turkish Teachers Foundation (Türkiye Öğretmenler Vakfı) na Akyazılı Foundation for Middle and Higher Education (Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı).
1979: Oge GM mbụ Trickle (Nhọrọ) e bipụtara.
1980-1983: Ndi agha agha nke ato nke Turkey mere na agha.
1982: Yamanlar College (ụlọ akwụkwọ sekọndrị) na İzmir na Fatih College (ụlọ akwụkwọ sekọndrị) na Istanbul ghọrọ “ụlọ akwụkwọ sitere na mmụọ nsọ nke Gülen” (GISs) izizi na Turkey.
1983-1990: Nzụlite nke ụlọ ọrụ na mmụba nke agụmakwụkwọ metụtara mmekọ GM na Turkey (ụlọ akwụkwọ nzuzo, ụlọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ na ebe a na-akwadebe ebe a na-akwadebe ya na mgbakọ na mwepụ na nke sayensị).
1986: ndị mmekọ GM zụrụ Akwụkwọ akụkọ Zaman.
1991-2001: GIS mepere na mba ndị na-abụghị Turkey (na post-Soviet Central Asia, Russia, na Post-Cold War Balkan mba, na mgbe e mesịrị na South na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia).
1994: E guzobere GYV, Journalists and Writers Foundation (Gazeteciler ve Yazarlar Vakf was) na Istanbul na-esote "Abant Platform," ogbako a haziri ahazi GM nke mere ka ndị ọgụgụ isi ọha na eze na-agbakọta ọnụ ọtụtụ ụbọchị nke "mkparịta ụka." E mere Fethullah Gülen onye isi GYV onye isi oche.
1995-1998: Gülen na-arụsi ọrụ ike na ndụ ọha na eze na echiche na, n'ọtụtụ ebe, gosipụtara onwe ya dị ka onye okpukpe nwere mmetụta na Turkey.
1994: IȘHAD, fortù Na-ahụ Maka idardị n'otu na Ndụ Ndụ (İş Hayatı Dayanışma Derneği) guzobere site na otu ìgwè nke ndị obere na ndị na-azụ ahịa, ndị ahịa GM jikọtara na mbupụ.
1996: Asya Finans (nke bụ Bank Asya ugbu a) guzobere site na otu obere ndị isi obodo jikọrọ aka na Fethullah Gülen.
1996-1997: Turkey's Islamist RP, Welfare Party (Refah Partisi) batara n'ọchịchị na njikọ aka nri-ezi Ezi athzọ. Onye nnọchi anya RP bụ Necmettin Erbakan ghọrọ onye mbu “Prime Minister” nke Turkey.
1997 (February 28): Ntinye aka nke atọ nke ndị agha Turkey na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere. A maara aha ọjọọ ya dị ka "mgbanwe ọchịchị nke oge a" nke Turkey. A manyere RP n'ike na amachibidoro Erbakan ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ndụ.
1997-1999: Ọnọdụ obodo Turkish na-emetụta ọrụ okpukpe. Nyochaa GM maka ịbụ obodo okpukpe nzuzo nke nwere ebumnuche ọjọọ.
1998 (Septemba 2): Gülen zutere Pope John Paul II maka mkparịta ụka banyere mmekọrịta ụwa n'etiti ndị Katọlik na ndị Alakụba.
1999: Gülen si Turkey gaa United States, dị ka ndị na-ekwuchitere ya si kwuo, maka mkpa ahụike.
1999: Vidio a na-agbasa na televishọn telivishọn gosipụtara Gülen ebubo na ọ na-agwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha "banye n'ime akwara usoro ahụ ruo mgbe ị ruru ebe ike niile. . . ”
2000: E gosipụtara Gülen na ebubo ịgba izu na-anọghị ya, wee nye akwụkwọ ikike njide.
1998-ugbu a: GIS mepere na mpaghara Sub-Sahara Africa, Latin America, Western Europe, na United States.
1999-ugbu a: Gülen bi na United States, nke kachasị nso na Sayrofburg, Pennsylvania.
1999: Ụlọ ọrụ Rumi guzobere na Washington, DC dị ka ndị mbụ (nke ọtụtụ) ndị na-efekọ ofufe ofufe na ndị na-arụ ọrụ GM na ndị na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na United States.
2001 (April): Ọgbakọ Glọn Gülen na Gülen Movement nọ na Ngalaba Georgetown na-enwe nzukọ ogbako mbụ.
2002 (November): The "Islamist-roots" AKP, Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi) bịara ike na Turkey.
2002 –2011: Ejikọtara njikọ aka na-ezighi ezi n'etiti AKP na GM, na-eme "njikọ Turkey ọhụrụ" na-achọghị mgbanwe.
2003: Nke a bụ mmepe mba nile nke ụlọ akwụkwọ gọọmentị na-ekesa GM na United States. N'ihe dị ka ọnwa July, 2014, ihe gbasara XISUMX nke GIS na-arụ ọrụ n'ihu ọha na-arụ ọrụ n'ime obodo iri abụọ na isii na United States na, nso nso a, na Washington DC.
2005: TUSKON, Njikọ nke ndị ọchụnta ego na ndị ọrụ mmepụta ihe (Türkiye Iş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) guzobere n'okpuru nduzi nke IȘHAD metụtara GM. Ọ ghọrọ ụlọ ọrụ na-abụghị ndị gọọmentị metụtara azụmahịa na Turkey.
2006: Gülen gbahapụrụ ebubo ịgba izu na Turkey.
2007 (January): Njikọ GM Taa Zaman E bipụtara nke mbụ dị ka akụkọ mgbasa ozi Bekee nke atọ nke Turkey kwa ụbọchị wee ghọọ nke kachasị ukwuu na mgbasa.
2007 (Jenụwarị): A hụrụ oghere ndị agha na-agbachitere n'otu ụlọ dị na Istanbul. Nke a mechara mee ka "nchọpụta Ergenekon" gaa na ndị ọrụ agha na ndị ọrụ agha na ndị na-ahụ maka ịzụ ahịa na-agba mbọ imebi ọchịchị AKP.
2007-2013: ule Ergenkon mere na Turkey. Ndị 275, tinyere ọtụtụ ndị isi obodo Turkey lara ezumike nká, e nyere ahịrịokwu. A tụrụ mmadụ iri na itoolu mkpọrọ ná ndụ. Ihe ndị ọzọ a kwadoro iji kwatuo ngwa ahụ na ịkpalite esemokwu ọha na eze (dịka, Sledgehammer, Glove, na Cage) weere n'ime ikpe Ergenekon.
2007: Ụlọ ọrụ gülen malitere na Mahadum Houston na Houston, TX.
2008: Aha Fethullah Gülen Atụ anya na Omenala mba ọzọ “Ọgụgụ Isi nke Ọhaneze Na-enwe Nwere Mmetụta Ọha na ”wa” nke sitere na ntuli aka e mere na ntanetị Ndị editọ na magazin abụọ ahụ gbara ọtụtụ isiokwu na-agba mbọ ịkọwa etu G whylen si merie na ihe kpatara ya.
2008: (November): Gülen meriri ogologo oge agha maka ọnọdụ ọpụpụ ya na United States ma nyekwa ya ikike ịnọ na-adịgide adịgide ("kaadị green").
2011: Otu esemokwu dị n'etiti GM na Turkey na-achị AKP malitere.
2011 (January): State Senate of Texas (USA) na-enye Nkwekọrịta Mkpebi 85 na-aghọta Fethullah Gülen "maka nkwado na-enye aka na nkwalite udo na nghọta."
2013 (June-July): Mkpesa ndị a na-akpọkarị "Gezi Park," nke malitere na Istanbul, gbasaa ruo obodo iri isii na obodo Turkey. Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii Turkey na-eme ka ndị agha ahụ dị ike, bụ nke natara ikpe ụwa.
2013 (November): Njikọ GM oge Akwụkwọ akụkọ kọrọ banyere ebumnuche AKP iji gbanwee usoro agụmakwụkwọ Turkey site na imechi ụlọ akwụkwọ nyocha niile. Echiche zuru ebe niile bụ na nke a bụ mwakpo AKP na GM nke ndị mmekọ ya na-achịkwa ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a.
2013 (Disemba 17 na 25): E nwudoro ndị ezinaụlọ nke ndị ọrụ AKP dị elu na ebubo ebubo iri ngo, nrụrụ aka, na ntanye. Ihe ndị a bụ Prime Minister Erdoğan na-akọwa ya ma tụlee echiche ọha na eze Turkey dị ka mmegwara nke ndị GM na-eguzosi ike n'ihe na ndị uwe ojii Turkey megide AKP.
N'ihu: Enwere iwu, mgbasa ozi, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'etiti ndị agha AK na GM na Turkey.
Ruo ọtụtụ afọ, ndị na-eme ihe nkiri metụtara na obodo Fethullah Gülen akpọwo onwe ha site na akara ngosi Hizmet, okwu Turkish maka "ọrụ" [maka / maka ndị ọzọ]. N’ụzọ dị iche, ndị na-ahụ ihe na-ekiri ihe na-emenụ, ahọrọla ịkpọ ndị na-eso G “len “Cemaat” (Jamaat), okwu sitere na Arabic nke pụtara obodo ma ọ bụ nzukọ.
N'ihi nkọwa zuru oke nke okwu abụọ ahụ, ebe ọ bụ na mmalite 2000s ndị na-ekiri ihe na-emetụ ọmịiko (ma ha bụ ndị agụmakwụkwọ, ndị odeakụkọ, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ndị nyocha amụma) ahọrọla okwu zuru oke, "Gülen Movement" (GM). Site na aha ato atọ a, Hizmet / Cemaat / GM na-ezo aka n'ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na nde mmadụ n'otu n'otu na Turkey, yana ndị mmekọ ha karịrị mba 120 n'ụwa niile. Agbanyeghi na ulo akwukwo nke mgbako na nyocha nke sayensi (ma obu nke ndi mmadu), GM gunyere atumatu na mgbasa ozi mgbasa ozi, ahia mba uwa, ego, teknụzụ nkwukọrịta ozi, iwu, ọrụ iwu, ịkwụ ụgwọ, na ikwusa ozi / mmekọrịta ọha na eze. Ma ọ bụ ezie na ugbu a ebumnuche nke ịchụ nta "ịchụ nta amoosu" nke ọchịchị AKP na-achị Turkey, Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Parti) mere, eziokwu ahụ ka bụ na kemgbe mmalite ya dị obere na ngwụsị 1960, GM etolitela Turkey kasị ukwuu na kasị akpa okpukpe obodo.
GM malitere dị ka ìgwè nsị nke obodo dịbu, ndị Nur, bụ ndị na-eso "Wonder of the Age" (“Bediüzzaman”) Nursi kwuru (afọ 1960). Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ekpughere Fethullah Gülen na nkọwa Nursi kwuru na kor'an, RNK, Epistles of Light Collection (Risale-i Nur Külliyatı). Mejupụtara edemede na azịza nye ajụjụ ndị edere n'ụdị akwụkwọ ozi nye ụmụ akwụkwọ ya, RNK nwere nkọwa ọgbara ọhụrụ nke nkuzi Kuran. Otu n'ime ihe ndị kacha dị mkpa na nkuzi ndị a bụ nkwupụta nke ọdịmma dị n'etiti Islam na sayensị nke oge a, yana arịrịọ siri ike maka ndị Alakụba ka ha bụrụ ndị gụrụ akwụkwọ n'ihe ọmụma nke oge a, n'agbanyeghị agbanyeghị ụkpụrụ omume Alakụba (Mardin 1989). RNK nwere ọtụtụ puku peeji, RNK ghọrọ isi iyi nke ihe ọmụma maka ọtụtụ nde ndị Turkey nwere ezi uche bụ ndị doro n'okpuru usoro Turkey maka ijikọ ọha na eze n'ime iri afọ nke Republic (1923-1950). Ka ọ na-erule oge ọnwụ Nursi na 1960, ndị Nur nọchitere anya ọtụtụ nde mmadụ n'ọtụtụ obodo ndị bụ isi. Na RNK, na na netwọkụ mmekọrịta nke Nur ọgụgụ ọgụgụ (dershane) mebere, ndị na-eso Nursi mepụtara isi mmalite njirimara nke mere ka ha kwekọọ njirimara ha na-achọghị mgbanwe dịka ime ime obodo na ndị na-akwaga obodo mepere emepe na ihe ndị mba Turkey nke oge a na-achọ na-eto eto ahia ahia ahia.
Mgbe Nursi gafere, ndị Nur ahụ gbasasịrị n'ọtụtụ otu, nke ọ bụla na ndị ọzọ na-ese okwu banyere otu kacha mma isi kesaa nkuzi Nursi. Agbanyeghị na n'etiti ọdụdụ nwa nke Nur, site na mbubreyo 1980s ndị na-enwe mmasị na G hadlen enwetalala ọtụtụ akụrụngwa nke nzukọ Nur ma tinye ha n'ọrụ maka ntọala agụmakwụkwọ mba, azụmahịa, ego, na netwọkụ mgbasa ozi. Ka ọ na-erule ngwụsị 1990s, GM abụrụla, dị ka ụfọdụ ndị na-ahụ anya si kwuo, nke kachasị na nke kachasị emetụta obodo niile Nur (Hendrick 2013; Yavuz 2003a, isi nke 8; Yavuz na Esposito 2003, Isi nke 1-2; Yavuz 2013) na dị ka ndị ọzọ, otu mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche (Turam 2006).
Ndị a maara dị ka "Onye Ozizi a Na-eme Ka Ọkà" ("Hocaeffendi") nye ndị na-asọpụrụ ya, Fethullah Gülen mụrụ na 1938 ma ọ bụ 1941 na Northwest Turkish Obodo Erzurum. Afọ a mụrụ ya bụ asọmpi, dị ka ọtụtụ ihe mepụtara n'ime na-egosi 1938, ebe ọtụtụ ndị ọzọ na-egosi 1941. Ndị na-eguzosi ike n'ihe na-arụtụ aka na nghọtahie a dị ka obere ihe na-esi na ya pụta site na ịtụ aro na ndị mụrụ ya na-egbu oge ịdebanye aha nwa ha nwoke, na na afọ ndụ ya dị obere.
Otú ọ dị, Hendrick (2013) na-atụle esemokwu a dị ka naanị ihe atụ mbụ nke usoro gbanyere mkpọrọgwụ nke "enweghị nghọta" nke na-arụ ọrụ ndị ọrụ GM mgbe ha na-ekwurịta onye isi ha na nzukọ ya (Isi nke 3 na Isi 8). Kedu otu na mgbe a ga-ewere Gülen dị ka onye ndu obodo, kedu na mgbe a ga-ewere ya dị ka onye ọgụgụ isi, onye nkuzi, onye na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ naanị onye edemede dị umeala na onye na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ. N'otu aka ahụ, mgbe mmadụ, azụmahịa, ụlọ akwụkwọ, uwe ozi, ma ọ bụ nzukọ na-aga n'ihu ka a ga-eme ka ọ pụta ìhè ma ọ bụ gọnahụ na ịbụ akụkụ nke GM dabere na ọ bụghị naanị na gburugburu, kamakwa na onye na-ajụ ajụjụ na onye. A tụlere na nkọwa dị n'okpuru ebe a, enweghị mgbagwoju anya nke ndị mmadụ na ụlọ ọrụ jikọrọ ibe ha na netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ha n'otu oge bụ otu n'ime isi GM nwere ike yana otu n'ime adịghị ike ọ na-apụghị izere ezere.
Agbanyeghị na mbido 1960s dị ka ndị na-eso ụzọ ndị na-eso Nursi, ka ọ na-erule ngwụsị afọ ndị 1970, Fethullah G attractlen na-adọta nnukwu ìgwè mmadụ okwu ihu ọha ya. N'oge a, ndị na-eso ụzọ ya rụrụ ọtụtụ ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ na İzmir na Edirne na Western Turkey, a na-agbasakwa kaseti nke okwuchukwu ya n'ọtụtụ ebe. N'agbata 1980 na 1983, n'oge ọchịchị ndị agha kachasị ogologo nke Turkey, ụmụazụ G followerslen nwetara ohere na agụmakwụkwọ nzuzo (Hendrick 2013: Isi nke 5, Yavuz 2003: Isi nke 8). N'ịgbalị igbochi mmechi nke steeti dị ka obodo okpukpe nzuzo, ha wezigharị ọtụtụ ụlọ obibi ndị dị na mbụ ka ha rụọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na-enweghị ego. Na 1982, Yamanlar High School na İzmir na Fatih High School na Istanbul ghọrọ ndị izizi “ụlọ akwụkwọ sitere n'ike mmụọ nsọ Gülen” (GISs) na Turkey. N'ime oge 1980, ọtụtụ ụlọ ọrụ meghere. Na mgbakwunye na ụlọ akwụkwọ elementrị na nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ụlọ ọrụ GM gbasaa ngwa ngwa n'ọhịa nke nhazi nyocha. A na-akpọ ya "ụlọ ihe ọmụmụ" (dershaneler), GM mechara tinye niche na usoro ọmụmụ usoro cram (Hendrick: Isi nke 5). Mgbe ụmụ akwụkwọ nọ na dershaneler ndị mmekọ GM bidoro na-anwale nke ọma na nyocha nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nke mahadum nke Turkey, na mgbe ụmụ akwụkwọ kọleji malitere ịmalite mmeri asọmpi agụmakwụkwọ mba, ọ na-esiri ndị nkatọ na Turkey ike ịkwado nkwupụta ha banyere ịkpụzi echiche okpukpe. GIS, ma ọ bụ maka ha iji kwado ebubo ha na GM abụghị ihe ọ bụla karịa otu nzuzo nke Islamist na-achọ ịkwatu mba ndị Turkey (Turam 2006: Isi nke 1-3).
Ga nke ọma na mgbakọ na mwepụ na sayensị / sayensị na agụmakwụkwọ sitere na nyocha rụpụtara ohere ịbawanye na ngalaba ndị ọzọ. Ationalkpụrụ nhazi nke ndị ntorobịa malitere na 1980 mgbe ọtụtụ narị puku ụmụ akwụkwọ na-enwu gbaa na-esonye n'ime usoro ahụ site na usoro nke ụlọ akwụkwọ nyocha. “Oldermụnna ndị okenye” (“ağabeyler”) gbara ụmụ akwụkwọ mahadum na-achọsi ike ume itinye oge ka ukwuu n’ime nkwadebe maka ule mbata ụzọ mahadum nke Turkey. Studentsmụ akwụkwọ nwere njikọ na netwọkụ GM nwere ohere ịnweta nkuzi n'èzí klaasị n'ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ na ụlọ ndị GM metụtara, nke a kpọrọ "ụlọ ọkụ" (işık evleri). Ọ bụrụ na ha gbasiri ike n'ule ahụ, ụmụ akwụkwọ ga-enweta otu ebe na mahadum Turkish. Mgbe ha mere nke a, ndị nkụzi ha na ndị nkụzi ha (ma ọ bụ ikekwe site na ụlọ) na-akpọtụrụ ha banyere atụmatụ ha maka ụlọ na ụlọ mgbe ha nọ na mahadum, ebe ha nọ na-enye ha ego iji nweta ego ha na-ebi na Gmail na işık evi. Mgbe ha na-ebi na işık evi, ụmụ akwụkwọ mahadum abụghị naanị agbam ume ka ha nọgide na-amụ ihe, kamakwa ka ha mara ozizi Fethullah Gülen na Said Nursi.
Ijikọ ụmụ akwụkwọ na netwọkụ na-eto eto nke ụlọ akwụkwọ, azụmaahịa metụtara agụmakwụkwọ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ozi na ụlọ ọrụ nkwukọrịta, ndị na-ebipụta akwụkwọ, ndị na-ebupụ ahịa, ndị ọrụ ngalaba ego kwere ka GM mepụta onwe ya ọdọ mmiri na-eto eto nke akụ na ụba mmadụ iji si na ya mepụta nnukwu ụlọ ọrụ akụ na ụba nke ndị na-eweta ngwaahịa, ndị ahịa, na ndị ahịa. Na mkpokọta, GM ịga nke ọma n'ọtụtụ ebe mepụtara mgbanwe dị mma nke "ahịa Islam" na Turkey (Hendrick 2013). GIS abụghị naanị ndị nkuzi ka ejiri ya site na netwọkụ mmekọrịta buru ibu, kamakwa yana akụrụngwa mgbasa ozi na IT, akwụkwọ ọgụgụ, na ngwongwo nnabata site na ụlọ ọrụ nwere mmekọ. Ndị nwe ụlọ ọrụ ndị a nọgidere na-enwe mmekọrịta chiri anya na GM na, ọtụtụ mgbe, ha kwadoro ozi GM site na ịkwụ ụgwọ ego ụmụ akwụkwọ na işık evleri, site na ịnye ụmụ akwụkwọ ohere ịga GIS nkeonwe, ma ọ bụ site n'inye isi mmalite mmalite maka ihe ọhụrụ Ihe GM. Dịka ọmụmaatụ, na 1986, ndị mmekọ GM zụtara akwụkwọ akụkọ dị na mbụ, Gazetesi Zaman, na ozugbo Turkey na mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi n'oge mbụ 1990s, otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahụ malitere ụlọ ọrụ telivishọn mbụ ya, Samanyolu TV. A malitere ịzụ ahịa abụọ ahụ site na ntinye ego na-amalite site na netwọk mmekọrịta GM ma ọ bụ na-ebute ụlọ akwụkwọ GM, dorms, na ụlọ.
Mgbe ọdịda nke Soviet Union daa, GM jiri ohere nke steeti Turkey iji zụlite mmekọrịta na Republic of post-Soviet Republic na Central Asia na Balkans. A malitere GIS site na isi mmalite mmalite nke Turkey na mpaghara abụọ ahụ, yana azụmaahịa azụmaahịa metụtara. Iji kwado ahia na mpaghara ndị a, otu azụmahịa na-azụ ahịa mbupụ pụtara, IȘHAD, The Association for Solidarity in Business Life, bụ 1994 (İş Hayatı Dayanışma Derneği). E guzobere ụlọ ọrụ na-ebugharị na ụgbọ njem ihe dịka otu oge, dị ka ụlọ ọrụ ego nke "Islam" (enweghị ọmụrụ nwa, nkekọrịta uru) (Asya Finans, ugbu a Bank Asya, est. 1996).
Site n'ike na mmetụta ka ukwuu bịara jiri mkpa ka ukwuu ịkọwapụta ọhaneze nke enwere ike ịghọta dị ka ihe na-arụpụta ọrụ tozuru oke ugwu ọha. Na mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze nke malitere na 1994, a mụrụ nku ọzọ nke ọrụ ọrụ GM na obodo ugwu Turkey nke Abant. N'ebe ahụ, otu ndị ọrụ mgbasa ozi mmekọ GM gbakọtara ọnụ ọgụgụ nke Turkey ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ na ndị na-ede akwụkwọ n'echiche a na-agụkarị, yana ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ na ndị edemede si n'ọtụtụ ebe. N'ịbụ nke a maara dị ka "Abant Platform," a na-atụ anya na nzukọ a bụ ohere maka ìgwè dị iche iche nke ndị na-eche echiche iji kwurịta ụfọdụ n'ime nsogbu ndị ọzọ na-akpata nsogbu nke ọha mmadụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Turkey. O mere ka o doo anya na ndi isi oru GM na ndi mmadu, ndi GYV, ndi oru nta akuko na ndi edemede (Gazeticiler ve Yazarlar Vakfı). Kwa afọ kemgbe, na ọtụtụ oge kwa afọ, Abant Platform na GYV haziri usoro dị iche iche gbasara mkparịta ụka na nzukọ ọmụmụ na ọtụtụ isiokwu. Ime njem gafere Turkey, na 1997 Gülen haziri nzukọ na Pope John Paul II iji kwurịta mmekọrịta ndị Alakụba / Ndị Kraịst. Ihe onyonyo nke nzukọ a ghọrọ ihe atụ nke ndị na-ahụ maka Gülen iji tụọ mgbe ha tụlere ezi obi ha na ngalaba nkwukọrịta na mkparịta ụka.
Mgbasa GM na 1990s bịara n'otu oge mgbe ọdịiche ọdịnala nke "ndọrọ ndọrọ ọchịchị Islam" nọ na ịrị elu n'okpuru nduzi nke Necmettin Erbakan onye duuru RP, Welfare Party (Refah Partisi) na ọtụtụ mmeri ntuli aka nke ọchịchị na 1995 na mmeri mba na 1996. RP guzobere gọọmentị njikọ na etiti aka nri Ezi Pzọ Party, na Erbakan ghọrọ onye mbụ "Islamist" Prime Minster nke Turkey. Na-elekwasị anya na mgbalị ya na mpụga nnọkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ, GM nwere ike ịnyagharị ịrị elu RP na ọdịda na mberede n'oge Turkey "post-oge a kuu" na 1997. N'agbanyeghị nke ahụ, GM apụtaghị n'oge a enweghị nsogbu. Na ihe mechara bụrụ nke akpọrọ "Usoro nke February 28," ndị agha Turkey manyere Erbakan n'ọchịchị site na iyi egwu agha ndị agha. N'ime afọ abụọ sochirinụ, steeti ahụ kwaturu ụdị ụdị okwukwe na nhazi ọchịchị niile. N’ebe a Fethullah Gülen gbagara United States na mbido 1999. Dị ka ndị na-ekwuchitere ya si kwuo, ihe kpatara ya bụ maka ọgwụgwọ maka ọnọdụ na-adịghị ala ala. Ma ọ bụ maka ahụike ma ọ bụ na ọ bụghị, obere oge ọpụpụsịrị na Turkey, G waslen gosipụtara na enweghị ya maka ịbụ onye isi nke otu ndị omekome ebubo ebubo na-achọ ịkwatu steeti Turkey. O bi na US kemgbe ahụ.
N'oge na-adịghị anya mgbe Gülen kwagara na United States, ndị ọrụ GM mepụtara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na mkparịta ụka GYV na mba ahụ dum. Ugbu a achọtara n'ụwa niile ebe GM na-achịkwa GIS na ebe ndị mmekọ GM na-azụ ahịa, US na-akwado ya ọtụtụ ndị na-enwe mmetụta nke ụlọ ọrụ ndị a n'èzí Turkey (na ọtụtụ n'ime ọnụ ọgụgụ). Ha gụnyere nzukọ Rumi na Washington DC (bụ 1999), Ụlọ Ọrụ Dialogue Institute na Houston (bụ 2002), Niagara Foundation na Chicago (bụ 2004), na Ụlọ Akwụkwọ Pacifica na Southern California (bụ 2003). N'ịnọchite anya ndị isi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị otú a na mba ahụ, nzukọ ndị a na-ahazi otu nzukọ GM, The Turkic American Alliance.
Na 2008, ụlọ ikpe gọọmentị etiti na Pennsylvania nyere Gülen ebighi ebi na US na mkpebi nke gbanwere agọnarị nke Ngalaba Nchebe Obodo. N'otu afọ ahụ, a kpọrọ Gülen “onye ọkaibe kachasị nwee ọgụgụ isi ọha na eze” na ntuli aka n'ịntanetị nke Atụ anya na Omenala mba ọzọ magazin. Ọ bụ ezie na ndị nchịkọta akụkọ nke magazin abụọ na-ekwutọ ya dị ka ihe ngosi karịa ikike dị ike iji mee ihe nyocha nke ntanetị online, n'agbata afọ 2007 na 2012 GM rutere otu nnọkọ na ùgwù na mmetụta na Turkey na mba ndị dị gburugburu ụwa.
N'ezie, n'ime 2000s, mgbalị ndị GM na-eme na US na n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe iji chee Fethullah Gülen dị ka ihe ọzọ nwere ike ịhọrọ iji mee ka ndị ọchịchị na-ekwu na ọ bụ ndị ọchịchị Muslim na-eweta ụgwọ ọrụ dị ukwuu. N'iji usoro nke Hendrick (2013: Isi 8) mee ihe, mmemme GM mere ọtụtụ puku nleta nke ndị mmadụ na ndị America na European Academia, mgbasa ozi mgbasa ozi, obodo okwukwe, ọkwa obodo, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na azụmahịa onwe ha. Ha haziri njem njem ntụrụndụ maka ìgwè ndị a na Turkey, ebe ndị prọfesọ, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị nta akụkọ, na ndị isi ọgbakọ nọ na Istanbul, İzmir, Konya, na ebe ndị ọzọ nwere omenala Anatolian na akụkọ ihe mere eme. Otú ọ dị, n'oge njem ndị a, ndị a "na-anabata ndị ebere" mụtakwara banyere onyinye ndị Mmezi (Service) nke Fethullah Gülen nyere na agụmakwụkwọ, mgbasa ozi, na azụmahịa na Turkey. Nancy Gallagher, bụ prọfesọ nke History na Mahadum California, Santa Barbara, na-akọwa otú a kpọrọ ya òkù n'otu n'ime njem ndị a dịka ndị a:
Na njedebe nke March 2009, enwetara m ozi email site na onye ọrụ na-akpọ m ka m soro otu ndị na-aga Turkey na n'okpuru ụlọ ọrụ Pacifica Institute. . . anyị ga-akwụrịrị ụgwọ ụgbọelu anyị, ndị ezinụlọ Turkiya ga-anọkwa na obodo Anatolian dị iche iche (2012: 73). . . Ekwetara m òkù ahụ na June 2009 gara Istanbul na ndị otu ọkachamara nke 10 Middle East Studies, ndị nnọchianya ụka, na ndị ọrụ a họpụtara ahọpụta (2012: 78).
Gallagher mụtara na ego maka njem ya, na ọtụtụ njem ndị ọzọ nke mere ka ndị a ma ama si California na Turkey, bụ njikọ azụmahịa nke Turkey nke nyekwara ụmụ akwụkwọ Turkey ndị mmekọ GM ka ha gaa US maka ọmụmụ ihe, na nke ahụ nyere ego dị mkpa maka ịhazi nzukọ nzukọ agụmakwụkwọ nke gbadoro anya na onyinye nke Gülen Movement na ngwakọta ofufe na mkparịta ụka dị n'etiti. Edere Gallagher na nhazi nke njem ndị a na olu nke ya na Sophia Pandya (2012) depụtara, nke e mepụtara mgbe otu nnọkọ a mere na Southern California na njedebe nke afọ 2009. Na-egosipụta usoro ịtọ ntọala iji nweta ọmịiko site n'aka ndị mmetụta, site na 2012, GM enyela nkwado ihe karịrị puku isii njem na Turkey site na US, ma hazie nzukọ iri na abụọ nke ndị na-ede akwụkwọ na-ede edemede na-akwalite mbọ GM. Ihe ka ọtụtụ n'ime nzukọ ndị a rụpụtara akwụkwọ (Barton, Weller, and Yılmaz 2013; Esposito na Yılmaz 2010; Hunt na Aslandoğan 2007; Yavuz na Esposito 2003; Yurtsever 2008).
Na mgbakwunye na njem nke mba ndị ọzọ, GM na-akwado nzukọ na ogbako, Turkish na Ottoman na-eme ememe omenala, kpọrọ okwu mkpịsị okwu nke e nyere na nzukọ GM, ime nri ngwa ngwa kwa ụbọchị (iftar), na ihe omume ndị ọzọ. N'akụkụ a, omume ndị a enyerela aka kwalite njem Fethullah Gülen gaa na ndị mmadụ si mba ọzọ.
Na mgbakwunye na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ dị iche iche na mba 120, mgbasa ozi mgbasa ozi na ntụrụndụ na-ebipụta, telivishọn, na n'ịntanetị, na ịzụ ahịa na ego, na ọrụ nchịkwa na ọrụ nchụpụ, GM na-aga nke ọma ndị na-ahụ maka enyemaka, Kimse Yok Mu, ọtụtụ ụlọ ọgwụ ndị dị na Turkey ugbu a, na 150 kwadoro akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na United States. N'April, 2013, TIME Magazine akpọrọ Fethullah Gülen otu n'ime ndị kachasị emetụta ụwa (Kinzer 2013).
A na-ekesa nkuzi Gülen na ebipụta na ntanetị site na narị narị akwụkwọ, akwụkwọ edemede, akwụkwọ akụkọ, na weebụsaịtị. Agbanyeghi na nkuzi ya niile di na mbipute na Turkish, otutu akuku oru ya (obu ezie na ha ezughi oke) bu asughariri ya na Bekee, ma buru kwa uzo pere mpe n'ime asusu ndi ozo nke uwa.
Ihe gbakwunyere na echiche Gülen kwupụtara banyere ụwa bụ mkpa maka "ndị ọrụ afọ ofufo," ndị "jupụtara n'ịhụnanya maka mmadụ niile," "ezigbo mmadụ" ndị na-anọchite anya ihe Gülen kpọrọ "ọgbọ nke olileanya." Ọrụ ọgbọ a bụ ịzụlite “ọgbọ ọla edo” n’ọdịnihu (altın nesil) nke ga-eweta ịhụnanya, ndidi, na nkwekọ na oge, nke ga -emepụta ọnọdụ maka ụbọchị ikpe:
Ihe anyi choro ugbua abughi ndi mmadu, kama ndi mmadu ji obi ha dum nebe Chineke no. . . ndị na-etinye echiche ha, na-ebute ụzọ nke mba ha, na ndị mmadụ niile, iji nweta nghọta na inyere ha aka ịchọta Chineke. . . mmụọ a raara nye. . . ndị na-awagharị Israel . . . n '] n] d nke Žfù opi nke ikpeaz iji kwadebe ndŽ nw r anw r] maka Mbiliten'] nw. . . Enwere ike iwere nke a dị ka mgbalị ikpeazụ anyị, ọganihu anyị gaa n'ọkwá anyị, nakwa dị ka ozi ọzọ nke nlọghachite nke a kpọrọ mmadụ. Dika ihe bu eziokwu, mba ndi enwere nsogbu di iche iche ana echere uzo ikuku nke olile anya. Lee ka umunwoke ahụ a gọziri agọzi si bụrụ ihe ndabara ọma ka ọ bụrụ ihe na-emetụta ihe omume dị otú ahụ. Na, ọzọ, lee ka ndị nwere obi ụtọ si bụrụ ndị ara ha na-anabata ikuku a (Gülen 2004: 105-10).
Ndị nkuzi metụtara GM, inye ndị ọchụnta ego, ndị na-akwado ndị mgbasa ozi, ndị nta akụkọ, na ndị ọzọ bụ Gülen nke "gọziri agọzi" nke a gwara ndị otu ha ka ha nye oge ha, ego ha na mbọ ha iji mepụta ọnọdụ maka ọbịbịa nke ọgbọ ọlaedo. N’ime ọtụtụ edemede ya banyere isiokwu a, Gülen na-ezo aka na “ọgbọ olileanya” dị ugbu a dị ka “ndị agha nke ìhè” na “ndị agha nke eziokwu.”
“Eziokwu” ndị agha Gülen na-akwalite bụ otu ihe ahụ “eziokwu” nke ndị na-eme ka ndị okpukpe na-eme ka a maliteghachi okpukpe n’ụwa niile na-akụzi. Gülen na-ele ụmụ mmadụ anya dị ka ndị si n'ụzọ nke omume na amamihe sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke kpafuo, nke ọ na-ele anya dị ka nsogbu sitere na ịre ahịa efu (ịhụ ihe onwunwe n'anya), ịchọ ọdịmma onwe onye, ​​na mmadụ iche. Inyere ndi Turkey na ndi mmadu aka inapu site na odida ndi mmadu choro ka ndi mmadu mee ihe (aksiyon insanları) na ndi mmadu nke oru (hizmet insanları) ndi nwere ike inye ndu ndi na-abia abia (irşad). Ndị okenye (a byabeyler) na ndị na-eto eto nọ na Gülen, na mezzo larịị na klaasị na ndị otu na-elekọta mmadụ (sohbetler), yana ọkwa nnukwu site na mbipụta na mgbasa ozi mgbasa ozi. Na mkpokọta, agụmakwụkwọ na sayensị sitere na GISs na Turkey na gburugburu ụwa, akụkọ mgbasa ozi na ntụrụndụ na-ebipụta ma na-agbasa site na ụdị mgbasa ozi GM, ngwaahịa ego nke Bank Asya nyere, ọrụ enyemaka nke Kimse Yok Mu nyere ? na ọtụtụ puku ọrụ ndị GM na ndị azụmahịa na-azụ ahịa na-arụkọ ọrụ bụ ọrụ (hizmet) maka ụmụ mmadụ. Nke a bụ kpọmkwem ihe kpatara ndị mmekọ GM ji ahọrọ ịhọpụta ọgbakọ ha, Hizmet (ma ọ bụghị cemaat ma ọ bụ GM).
Turkey bu ndi Sunni Muslim bu ndi mmadu, ma ndi isi "ndi isi" Islam kwadoro ya dika ulo akwukwo iwu Hanefi (Hanafi). N’okpuru okpukperechi steeti Ala Islam, Otú ọ dị, ọdịnala gbanyere mkpọrọgwụ nke Sufism na Turkey. Ndị Nakşibendi (Naqshbandi), ndị Mevlevi, Rifai, na ndị ọzọ nwere akụkọ ihe mere eme ogologo oge na Anatolia. Akụkụ abụọ nke Alakụba akụkọ ihe mere eme na-agwa ọtụtụ ihe banyere echiche ụwa, nzukọ, na omume omenala nke Fethullah Gülen na GM na-arụ ọrụ, mana ọtụtụ ọrụ ya na-abụkarị ihe nnọchianya nke "ọdịnala echepụtara" nke dịtụ iche na okwu GM.
Ndị nkuzi, ndị edemede, ndị editọ, ndị nta akụkọ, ndị ọchụnta ego, na ndị ọrụ akụ na-akpachi anya na GM karịa mgbe ha anaghị ebi ndụ ọgbara ọhụrụ, mana ọ na-ebi ndụ dị nsọ. Imirikiti ndị mmekọ na ụlọ ọrụ GM na-eme nke ọma na akụ na ụba asọmpi asọmpi Turkey, ụlọ akwụkwọ ya eguzobewokwa akara maka onwe ha site na imesi ike mgbakọ na mwepụ, sayensị, na agụmakwụkwọ metụtara azụmahịa. N'ikwu ya, ọkwa dịgasị iche nke njikọ na obodo na-egosi ọkwa dị iche iche nke okpukpe. Ma mmadụ n’ekpe ụbọchị ise n’ụbọchị (namaz; salat) ma ọ bụ na ọ gaghị ekpe ekpere Fraịdee, ọ na-ezere ajọ omume dị ka ị smokingụ sịga, ma ọ bụ (ọ bụrụ na nwanyị) ahọrọ ikpuchi ga-adị iche na mpaghara GM niile. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ "ejikọtara" ya, o yikarịrị ka a ga-agba ya ume ibi ndụ na-adịghị agbanwe agbanwe. Agbamume dị otú a na-eme mana ụzọ ihe atụ nke ndị ọzọ setịpụrụ ma na-amalitekarị mgbe akpọrọ ndị mmadụ ka ha biri na işık evi mgbe ha na-aga mahadum. Ọ bụ n'ụlọ ndị a ka mmadụ na-aga sohbet mbụ ya.
Na Islam, sohbet (pl. Sohbetler) n'akụkọ ihe mere eme na-ezo aka na mkparịta ụka nke okpukpe dabere n'etiti onye Sufi sheikh na onye na-eso ụzọ ya. Okwu a bu ihe omuma banyere ihe omumu, ebumnuche bu ka a weputa ezi nkowa banyere ibi ndu dika uche Chineke. Na GM, Otú ọ dị, sohbet na-ezo aka n'omume nke nzukọ mgbe niile n'obere ìgwè iji gụọ nkuzi nke Fethullah Gülen na Said Nursi. GM sohbet bụ, n'ọtụtụ ụzọ, mgbanwe nke omume nke ụmụazụ Said Nursi malitere, bụ ndị, n'etiti akụkụ nke narị afọ nke iri abụọ, ga-ezukọ na obere ìgwè maka ịgụ na mkparịta ụka nke RNK amachibidoro Nursi. Ghara inwe mgbagwoju anya na ulo akwukwo ndi nlere ule na Turkey, a na-akpo ndi otu Nur a na-agu "dershane" ma n'ime otutu afo weputara omume nke ndi Nur. N'ịga n'ihu n'omume a dị ka sohbet, GM gosipụtara nzukọ dershane site na okike na afọ, wee weghachite ha dị ka oghere maka mmekọrịta mmadụ na ibe (Hendrick 2013: Isi nke 5).
Ndị na-eme ihe nhazi na-elekọta ndị ọkà mmụta nọ na GM işık evleri, site na "ndị nhazi ime mmụọ" na ụlọ ọrụ ndị mmekọ GM, nakwa site n'aka ụmụnna nwoke / ụmụnna nwanyị ndị a na-asọpụrụ (ağabeyler / ablalar) na ndị nkụzi (obodo) na agbata nile nke Turkey na n'etiti obodo GM gburugburu ụwa. "Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịgụta ihe, ị ga-enyerịta ego, nyefee ego na nkwurịta okwu" (nke a na-akpọ "GM sohbet" na ndị ọzọ nọ na Istanbul na London, Baku na Bangkok, New York na New Delhi, Buenos Aires na Timbuktu. Hendrick 2013: 116).
Ezigbo na Himmet: GM na-achọ ịzụlite ihu ọma na-achọ Chineke (ehlas) n'etiti mmadụ nile maka omume niile kwa ụbọchị, Yavuz (2013: 77) na-akọwa na "Gülen abụghị naanị na-achọ ime ka obi na uche nke ọtụtụ nde ndị Turks ma nwee ike ime ka ha kwenye tinye aka na ozi nke ịmepụtawanye mmadụ na ndị ọzọ dị mma. "Nke a pụtara na ndị na-eguzosi ike n'ihe GM na-agbalị ịkpụzi ndị mmadụ n'otu aka nke mgbanwe mmekọrịta ọha na eze dịka ụkpụrụ omume na ụkpụrụ omume dị iche iche nke ndị Alakụba. Gülen na-akụzi na ngbanwe dị otú ahụ na-achọ iso ndị mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emekọ ihe ọnụ, na n'ime ya; ọ na-arịọ ndị ọrụ (hizmet insanları) iji mee ka ndị ọzọ kwenye na "eziokwu" ahụ site n'itinye ihe nlereanya maka nṅomi. Echiche Turkish nke na-eme ka usoro a na-akpọga ọrụ GM bụ temsil, nke Tittensor (2014: 75) sụgharịrị dị ka "ihe nnọchiteanya." Otu kachasị mma iji "na-anọchite anya" ihe Gülen kpọrọ "ezigbo mmadụ" bụ inye ọrụ (hizmet) nye ndị ọzọ dịka onye na-eme ihe nkiri na netwọk GM.
Na mgbakwunye na "ijere" obodo ahụ site na hizmet, a na-agbakwa ndị mmadụ ume ijere obodo ahụ ozi n'agbanyeghị na onyinye ego na-akwalite ego (hemet). N'okwu a na-ekwu na obodo ahụ, ndị mmadụ "na-enye dị ka ihe ha si dị," nke na-ezo aka n'eziokwu ahụ na mgbe onye nchịkọta akụkọ na ụlọ ọrụ gọọmenti nwere ike ịnye GM nwere ike inye onyinye nke $ 300 kwa ọnwa na "onye nhazi ime mmụọ" na ụlọ ọrụ ya, onye nwe ụlọ ahịa nwere ọgaranya nwere ike inye onyinye iri ma ọ bụ iri abụọ na ego a na-enye onyinye onyinye yamet (Ebaugh 2010; Hendrick 2013: Isi nke 5).
Omume nke onye na-agụsị akwụkwọ na mahadum bụ ndị "na-arụ ọrụ afọ ofufo" na-akụzi na GIS na mba ndị dị n'ụwa. Ugbu a bụ nhọrọ nkịtị maka ndị na-eto eto na Turkey, ndị nkụzi GM na-aga njem iji kụziere maka obere ego ha na-atụ anya na ha ga-arụ ọrụ ogologo oge, oge ndị ọzọ, na ngwụsị izu, ọ bụ ezie na ha kwụrụ ụgwọ, ha na-atụ anya na ha ga-enye ya onyinye mgbe niile . Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ị nweta ụfọdụ uru site na GM na mbido, (ma ọ bụ, nkuzi n'efu, ụgwọ ịgbazinye ego, wdg.), Ndị nkụzi na GIS na-ekwukarị na ọ bụghị nanị na ha dị njikere, ma a kwanyere ha ùgwù ka ha "jee ozi" dị ka ndị nkuzi n'ụwa nile na inye ụfọdụ òkè nke ego ha na-enweta n'obodo. N'akwụkwọ odide ya, Fethullah Gülen na-ezokarị aka na ndị nkụzi dịka GIS na Turkey na gburugburu ụwa dịka "ndị dike na-achụ onwe ha n'àjà."
A na-eduzi nduzi na GM site na usoro ikike nke okenye, okenye, na ethno-nationalist nke na-agbatị n'ofe ya zuru ụwa ọnụ. N'elu bụ Fethullah Gülen onye bi na ndagide onwe ya na Pennsylvania na nnukwu ụlọ ọtụtụ akpọrọ Golden Generation Retreat na ofufe Centre na ugwu Pocono. Site na Pennsylvania, Gülen na-elekọta GM dị ka onye isi na-adọrọ adọrọ nke na-ejigide nkwukọrịta naanị ya na ndị pere mpe dị ezigbo nta na ụmụ akwụkwọ. Ndị ikom a, yana ọnụ ọgụgụ ndị isi na ụlọ ọrụ GM gburugburu ụwa bụ isi nke nzukọ GM. Akpọrọ nke a na-akpọ ndị nkuzi (hocalar) ndị isi ndị a gụnyere isi obodo GM (cemaat), netwọkụ mmekọrịta gburugburu ụwa nke ụmụ akwụkwọ zuru oke nke Hocaefendi Fethullah Gülen. Na mgbakwunye na ndị na-anọkarị Gülen nso na Poconos, ndị ọzọ na-eduzi ma ọ bụ na-achịkwa otu n'ime ọtụtụ mkparịta ụka na ndị na-eme njem na US, Europe, ma ọ bụ Turkey. Fọdụ bụ ndị edemede na-ede akwụkwọ gbasara Fethullah Gülen, ebe ndị ọzọ na-ahazi mbọ dị iche iche nke GYV na Istanbul, ma ọ bụ bipụta ogidi mgbe niile na Akwụkwọ akụkọ Zaman (Hendrick 2013: Isi nke 4). Ha niile bụcha mmadụ, ma ọtụtụ ihe kpatara njikọ ha sitere na mmalite obodo Gülen nke ndị na-eguzosi ike n'ihe na Edirne na İzmir.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ puku ndị inyom na-amata GM, na-akụzi na GIS, ma na-ekere òkè n'akụkụ dị iche iche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọrụ na otu ma ọ bụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ GM, ndị na-arụ ọrụ nke a na-arụ ọrụ nke ọma na-akwagide ogo nke okike (Turam 2006). Ọzọkwa, n'agbanyeghị njikọ aka ya na agbanyeghị ọtụtụ puku ndị enyi na ndị na-abụghị Turkish na ndị isi ha, ihe ndị dị na ya na-ejikwa nlezianya na Turkey na Turkkism.
Njikọ aka na-ewepụ otu oge na-agụnye netwọk nke GM "ndị enyi" (arkadaşlar). Ụdị ọkwa nke a gụnyere ọtụtụ narị puku ụlọ ahịa ndị na-arụ ọrụ na GM ụlọ ahịa dị n'ọma ahịa dị ka ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa. Akụkụ buru ibu nke ndị ọrụ ha (ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile) na-enye onyinye mgbe nile (hemet), ọtụtụ na-agakwa na sohbet mgbe nile. Ọ bụ ezie na ị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị njem, Otú ọ dị, netwọk netwọk netwọk na-agbanye na ntụpọ ndị na-enweghị ntụpọ si otú ahụ na-akọwapụta ọkwa a site na ihe ndị a. Ọ bụ ezie na ndị ahịa nwere ike ịnọgide na-enwe mmekọrịta chiri anya na GM, o yikarịrị ka ọ gaghị abụ onye nhazi nke nakọtara onye ọrụ si n'aka ndị ọrụ. N'ezie, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike inwe obere ihe gbasara GM. Na ọkwa a, a na-enye yamet na nzukọ nchịkọta mgbe niile nke a na-ahazi site na netwọk mmekọrịta, kama ịnọ n'ebe azụmahịa, ọ ga-abụrịrị na ebumnuche dị na ya dị ka ibu ọrụ zuru oke. Arkadaşlar nwere ike ịbụ ndị ọchụnta ego, ndị uweojii, ndị ọka iwu, ndị ọkà mmụta sayensị, ma ọ bụ ndị nta akụkọ. Ụfọdụ na-arụ ọrụ na ahia ụwa, ebe ndị ọzọ nwere obere ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ ma eleghị anya na-arụ ọrụ na teknụzụ ọmụma, engineering, ma ọ bụ gọọmentị. N'ịbụ ndị ka ibu karịa, ndị ọrụ nhazi nke ụgbọ na-arụ bụ ihe ka ọtụtụ n'ime ndị natara akwụkwọ nyocha nke akwụkwọ nyocha na ụlọ akwụkwọ GM cram, bụ ndị bi na Işık evleri GM na-aga na mahadum, na onye GM na-adabere na ya.
Na-abụghị arkadaşlar bụ ọkwa nke ndị na-akwado GM na ndị na-eme ebere (yandaşlar). Njikọ njikọ a nwere ma ndị Turks ma ndị na-abụghị ndị Turkey. Ọtụtụ n’ime ha bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị; ndị ọzọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ. Fọdụ bụ ndị nta akụkọ ma ọ bụ ndị a họpụtara ahọpụta na steeti; ndị ọzọ bụ ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ nne na nna ụmụ akwụkwọ na GIS; ụfọdụ nwere ike ịbụ ndị na-erite uru site na GM-ịkwalite azụmaahịa mba ọzọ. Site na agụmakwụkwọ gaa na mgbasa ozi ọdịbendị / mkparịta ụka, site na akwụkwọ akụkọ na ọrụ enyemaka, yandaşlar na-akwado mbọ GM n'ebe ọ bụla ha bi. Ọ bụ ezie na ọ bụchaghị na ha raara onwe ha nye ha, ọtụtụ na-enye aka n'agbanyeghị otú ha nwere ike. Nke a nwere ike ibia n'ụdị onye otu na-ahụ maka agụmakwụkwọ na-atụ vootu maka akwụkwọ akwụkwọ akwụkwọ akwụkwọ akwụkwọ na Toledo, Ohio mgbe ọ gara Turkey na njem mkparịta ụka nkwado, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbịa n'ụdị onye ọka iwu na-ahụ maka ikike na-ekwenye ịde akaụntụ nnabata banyere nsogbu iwu Gülen na Turkey na US (Harrington 2011). Onye ọ bụla na ebe ọ bụla ha nọ, yandaşlar na-akwalite ọrụ mkpokọta nke GM GM n'ihi na ha kwenyere na ndị ọrụ GM (hizmet) na-enye maka ọha mmadụ kwesịrị ịja mma.
Usoro ikpeazụ nke njikọ ga-abụ nke kachasị ukwuu, nke kachasị ike, yana nke kachasị mkpa maka GM na-aga n'ihu. Nke a bụ ọkwa nke ndị na-amaghị ihe. Imirikiti ụmụ akwụkwọ na GIS na mba dị iche iche gburugburu ụwa, ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ asụsụ Bekee nke ndị ọrụ mgbasa ozi GM mepụtara, yana ọnụ ọgụgụ na-enweghị ọgụgụ isi nke ndị ahịa Turkey na ndị si mba ọzọ nke ngwaahịa ndị amịpụtara na GM amatachaghị GM dị ka otu mmekọrịta mmadụ na ibe. Hendrick na-akọwa dị ka ndị a:
Ọ nwere ike ịbụ nwa akwụkwọ asụsụ Turkish na Stanford na-eji akwụkwọ ọgụgụ Dilset eme ihe, mana ọ nwere ike ọ maghị na ọ bụ ụlọ ọrụ mmekọ GM mepụtara Dilset. Ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụ onye mbubata na Thailand nke onye ọrụ ya bịanyere aka na nkwekọrịta ogologo oge na onye na-ebubata GM si Turkey, mana enweghị echiche banyere mmekọrịta mmekọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ na gọọmentị mmekọ mmekọ GM nke mere ka mmezu nke azụmahịa ahụ pụta. Ndị ahịa na-amaghị ama nwere ike ịma obere Fethullah Gülen, mana ọ na-akwado GM naanị otu (Hendrick 2013: 121).
Kemgbe mmalite nke GM, ọtụtụ ndị na-ede akụkọ akụkọ Turkey, ndị ọgụgụ isi ọha na eze, na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ekwuola na GIS na-arụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ maka ịkpụzi ntorobịa Turkey maka ọdịmma nke atụmatụ Islamist Gülen. Turam (2006) malitere site na akuko ihe nlere anya banyere esemokwu a ogologo oge na okwu ihu ọha nke Turkey (isi 1). Ihe nkwuputa ochie (na nso nso a) bụ na Gülen na-ekwusi ike agụmakwụkwọ n'ihi na iji mezuo ebumnuche ya, ọ chọrọ ndị na-eguzosi ike n'ihe ka ha banye n'ime ndị agha Turkey, ndị uwe ojii nke mba ahụ, ndị ikpe, na ụlọ ọrụ gọọmentị ndị ọzọ iji kpochapụ ndị Turkey Republic site n'ime. Iji chọta ụzọ ha ga-esi banye n'ụlọ ọrụ ndị a, ha kwesịrị ịsọ mpi n'ahịa ọrụ asọmpi, nke chọrọ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ndị na-enyefe ọrụ na ngalaba, yana mmekọrịta ọha na eze.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Gülen na ndị na-eguzosi ike n'ihe ya agbaghawo ebubo ndị a site n'ikwu na n'ọchịchị onye kwuo uche ya na onye ọ bụla ga-enwe ike ịchụso ebumnuche ọrụ ya dịka nkà na ọdịmma ya. Ọ bụrụ na ndị uwe ojii, ndị ọka iwu, ndị ọka ikpe, na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'okpukpe ma ọ bụ na-elekọta mmadụ, nke ahụ kwesịrị ịnọgide na-abụ nke aka ha ma ghara itinye ha na omume nzuzo. N'agbanyeghị nkwupụta ndị dị otú a, agbanyeghị, ihe ịrụ ụka siri ike bụ ihe ịma aka siri ike nye Fethullah G maintainlen na GM bụ ịchekwa njirimara ya "na-abụghị ndọrọndọrọ ọchịchị". Ọrụ a gosipụtara ihe ịma aka karịsịa mgbe GM guzobere njikọta na AKP na 2000s iji kpalite mgbanwe ọchịchị onye kwuo uche ya nke Turkey.
N'okwu a, ọ dị mkpa imesi ike na AKP na GM bịara dịka otu mmekọrịta nke ndị mmadụ na-ahụ maka ndị mmadụ na-eme ihe akụkọ (ndị dịka, ndị Kemalist, ndị na-ekpe okpukpe, na ndị ọzọ) dị ka ndị na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na-ahụ maka akụ na ụba na ndị na-elekọta mmadụ dị iche iche (nke bụ, ndị Turks dị nsọ). N'ezie, ruo n'oge na-adịbeghị anya, ndị isi AK dị ka Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan, na ọbụna Prime Minster Erdoğan na-akwado nkwado GM (eg, Abant Platform, Turkish Language Olympics) ma na-eto mgbe niile maka ihe GM na-arụ " Ụlọ akwụkwọ Turkish "na nleta ndị Thailand, Kenya, South Africa, na n'ebe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ruo mgbe ndị ọrụ mgbasaozi GM na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi n'oge na-adịbeghị anya na-ekwupụta nkwado maka atụmatụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị AKP na-adabere na njedebe nke ọchịchị onye kwuo uche nke Turkish. Tupu 2013, a maara ọnụ ọgụgụ nke ndị nnọchiteanya AKP nke etiti ka ha nwee njikọ chiri anya na GM na mmekọrịta azụmahịa n'etiti ụlọ ọrụ ejikọtara ha.
Mgbe mmeri nke ntuli aka nke atọ nke AKP na 2011, agbanyeghị ọdịmma dị n'etiti GM na AKP (dịka, ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmekọrịta ọha na eze, echiche mmepe mmepe, ọdịmma nke iwepụ nlekọta ndị agha Turkey na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Turkey na ọha mmadụ) ezughi iji jide ụlọ ọrụ abụọ ahụ jikọrọ ọnụ dịka njikọta mmekọrịta. Nsonaazụ bụ mmalite nke ọrụ gọọmentị, iwu, na mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze n'etiti akụkụ abụọ ahụ gara n'ihu na-enweghị njedebe. Dabere na ọtụtụ ndị na-ekiri ya, mmalite nke esemokwu ahụ laghachiri na 2010, ebe ọzọ na-arụtụ aka na otu ma ọ bụ ihe omume ọzọ dị mkpa na 2011 ma ọ bụ 2012. Otu ihe atụ nke esemokwu a na-atụkarị aka ịgụnye nghọtahie ọha na eze nke Gülen na njikwa AKP nke aha ọjọọ “Mavi Marmara Mberede. Ihe omume Mavi Marmara na-ezo aka na ihe mere na 2010 mgbe ọtụtụ ụgbọ mmiri enyemaka nke otu ọrụ ebere okpukpe Turkey na-achọ imebi mgbochi Israel nke Gaza na Palestine. Nchịkọta nke ndị na-eme ihe ike na mba dị iche iche banyere n'ụgbọ mmiri iji wepụta nri na enyemaka. Mgbe flotilla batara na mmiri Israel, ndị ọchịagha Israel batara n'otu n'ime ụgbọ mmiri ahụ, wee gbapee ndị ọgụ na-enweghị ngwa ọgụ, wee gbuo mmadụ itoolu. Ha niile bụ ndị Turkey na asatọ bụ ụmụ amaala Turkey (otu bụ Turkish American). O were afọ abụọ Israel rịọ mgbaghara maka mmemme ahụ, na mmekọrịta ndị Turkey-Israel enwetabeghị kpamkpam. Ihe atụ ndị ọzọ gụnyere akwụkwọ mkpesa nke Hakan Fidan (onye AKP họpụtara Chief of National Intelligence) na 2012 site na onye ọka iwu nwere njikọ metụtara GM, yana esemokwu ọha na eze n'etiti Gülen na Prime Minster banyere njikwa nke ngagharị iwe Gezi na oge okpomọkụ nke 2013. Naanị atọ n'ime oge esemokwu a na-ekwukarị, ịkọ nkọ banyere esemokwu esemokwu gosipụtara na njedebe nke 2013 mgbe agha abụọ ahụ jikọtara onwe ha na "akụkụ" ọ bụla na-eyi egwu ibibi nke ọzọ. Ihe ndekọ dị nkenke banyere esemokwu na-aga n'ihu bụ ndị a:
Site na nkwụsị nke ule Ergenekon na Sledgehammer nke Turkey na ntinye aka nke ndị agha Turkey na ikike ndị nkịtị, GM na AKP abụọ chọrọ iji mejupụta ikike ikike Turkey. Na ebubo nke ndị ndu GM gọrọ agọ na isi mmalite nke GM, a kwenyere na ndị mmekọ GM na-achịkwa ọtụtụ ndị ọka ikpe Turkey na ndị uwe ojii na mba ahụ dum. Mgbe njedebe nke ikpe Ergenekon na Sledgehammer, ndị agha GM na ụlọ ọrụ abụọ ahụ kwenyere na ha gbanwere nlebara anya nyocha ha site na ndị nche ochie gaa AKP. Mgbe Prime Minster Erdoğan chọpụtara eriri waya na ọfịs ya na mbubreyo 2012, e chere na GM tinyere aka n'ụzọ ụfọdụ.
Mgbagwoju anya nke esemokwu malitere ịmalite na November nke 2013 mgbe ndị mmekọ GM oge akwụkwọ akụkọ bipụtara otu akụkọ gbasara atụmatụ AKP imechi ụlọ akwụkwọ ọsịsa niile eji enyocha ule dịka akụkụ nke mbọ gọọmentị na-eme maka ịhazigharị agụmakwụkwọ kacha elu. Dị ka isi iyi nke mbanye maka nzukọ mkpokọta GM, njem a gụnyere mwakpo dị adị na ikike GM iji kwado onwe ya ogologo oge. Na Disemba 17, 2013, ndị ọka iwu Istanbul nwere njikọ njikọta na GM megwara site na ijide ụmụ nke ndị isi ụlọ ọrụ AKP atọ, yana ọtụtụ ndị isi obodo na ndị ọchụnta ego na ebubo ebubo na nrụrụ aka. Anwụchiri bụkwa onye Azeri-onye ọchụnta ego onye Iran bụ onye e boro ebubo na ọ na-eme ọrụ nzuzo na-azụ ahịa ọlaedo n'etiti Turkey na Iran. Ihe akaebe gụnyere igbe ego akpụkpọ ụkwụ achọtara n'ụlọ ndị a na-enyo enyo, yana ndekọ ekwentị, tinyere ihe ndị ọzọ, metụtara ọtụtụ ndị ọrụ AKP, gụnyere nwa Prime Minister Erdoğan.
2014 malitere site na Erdoğan lambasting ihe ọ kpọrọ "ọnọdụ yiri nke ahụ" (na-ezo aka na GM) maka ịnwale ọgbaghara megide AKP. N’ọnwa ndị sochirinụ, a chụrụ ma ọ bụ zigharịa ọtụtụ narị ndị uwe ojii n’ógbè ahụ dum, e wepụkwara ọtụtụ ndị ọkàiwu n’ebe ha nọ. Ebe ọ bụ na emeela nchọpụta banyere nrụrụ AKP, ọtụtụ n'ime ihe ndekọ ederede na-eduga njide ejidere December 2013 ka a tụbara na ebe a na-amaghị aha nke zipuru ọtụtụ ndekọ olu na Twitter nke metụtara ọtụtụ ndị ọrụ AKP (gụnyere Erdoğan n'onwe ya) nke njide, iri ngo, na ire ure. Na ntuli aka nke ime obodo na-abịa na Machị, Erdoğan gbachitere onwe ya site n'ịkpọsa kwa ụbọchị na ọ bụghị ọchịchị ya, mana ọchịchị onye kwuo uche ya nọ na nnọchibido na Turkey: “Disemba 17 bụ ntụpọ ojii na akụkọ ntolite ọchịchị Turkey. . . Ọ gafeela mbọ niile mwakpo na mbụ ma edekọ ya dị ka aghụghọ nke steeti, ọchịchị onye kwuo uche ya na mba ahụ ”(Resneck 2014).
N'oge na-adịghị anya tupu ntuli aka, Erdoğan hotara Twitter dịka ihe egwu nye ọha mmadụ, ma gbochie Turkish ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi maka izu abụọ. Ọ bụ ezie na mmachibido iwu ahụ gbanwere na mmalite April, ntụle aka March 30 bịara, Erdoğan wee nwee ike ịchọta mmeri dị ukwuu maka AKP (pasent iri anọ na isii) na nhoputa mpaghara n'ógbè ahụ dum.
Kemgbe Machị 30, Erdoğan ewerela ọgụ ya megide "steeti yiri ya" ruo ebe ọhụrụ. Ọchịchị ya anọgidewo na-ekpochapụ ngalaba ndị uwe ojii na ọfịs ndị gbara akwụkwọ, gbara ume ka ọha na eze gbanwee site na GM's Bank Asya (ma na nso nso a chọrọ ka ọ bụrụ mba ya), gbochie nkwekọrịta steeti na ụlọ ọrụ ndị mmekọ GM, ma kagbuo nkwado steeti maka ihe omume GM na-akwado ( ịmaatụ, Asụsụ Olimpik Asụsụ Turkish). N'aka nke ọzọ, Prime Minster Erdoğan gbara akwụkwọ ikpe megide ọtụtụ ndị nta akụkọ metụtara GM maka nkwutọ.
Gülen nabatara ihe omume ndị a na mbụ na-egosi na ya ma ọ bụ ndị na-ahụ ya n'anya nwere ihe ọ bụla jikọrọ ya na izipu wiretappings na-akwadoghị, na-akpali ọgba aghara ọha na eze, ma ọ bụ na-edegharị nchọpụta ndị omempụ, wdg. oge na Taa Zaman akwụkwọ akụkọ, gbanwere ọtụtụ n'ime ihe ha na-elekwasị anya n'ịkọ akụkọ banyere akụkọ a na-efu maka akụkọ ndị ọzọ.
N'ezie, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akụkọ na oghere ederede nke akwụkwọ abụọ ahụ ka raara nye ịjụ ebubo Erdoğan na ịse onye ndu ahụ dịka onye aka ike nke na-anwa ịkwado ikike ya site na iwepịa ndị na-ekwenye ekwenye. (Lee Sezgin 2014 maka akụkọ asụsụ Bekee nke mgba a site na GM). Enwekwara mkparịta ụka na Fethullah Gülen nke onye nta akụkọ GM metụtara ma bipụtara na oge na Taa Zaman banyere saga (Dumanli 2014).
Ihe mgbagwoju anya nye ụfọdụ, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na GM na AKP na-ejikọ echiche ụwa nke ọma ruo n'ókè nke na "Gülenism" abụrụla echiche gọọmentị na Turkey (Tuğal 2013). Nke a dị mkpa n'ihi na ọ na-egosi na nghọtahie dị ugbu a karịrị ike karịa nkà ihe ọmụma, a na-atụgharịkwa ya nke ọma dị ka mgba n'etiti ndị ọkachamara nwere uche dịka ndị toro mmekọrịta ibe ha, na ndị na-a toaghị ị toa ntị na mmetụta nke ndị ọzọ.
Ihe ọ bụla ga-esi na ya pụta, GM na-abụ onye nke abụọ naanị AKP na Turkey na ịkọwa nchepụta na njirimara mba maka ndị Turks dị nsọ. Ọzọkwa, n'adịghị ka AKP GM na-aga n'ihu ịgbasa mmetụta ya gafere Turkey ebe ndị na-eme ihe nkiri na-asọ mpi maka obi na uche nke ndị na-abụghị ndị Turkey na-ele anya na Turkey dị ka ihe atụ maka nkwụsi ike "East / West," Muslim / Christian, pious / modern mmekọrịta obodo. Ọ bụ ezie na njedebe GM / AKP na-enweghị njedebe, ndị ọrụ GM na-atụ anya na mmụba ha na mba ọzọ emeela ka mmetụta ha sie ike ruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọgbọ na-abịa, na Fethullah Gülen ka bụ otu n'ime ndị isi kachasị nwee Islam.
Barton, Greg, Paul Weller, na Ihsan Yilmaz. 2013. World Muslim and Politics in Transition: Ntinye aka nke Gülen Movement. London: Ndị na-ebipụta akwụkwọ na Bloomsbury.
Dumanli, Ekrem. 2014. "Ọchịchị Alakụba Gülen Kpọtụrụ Ọnọdụ ndị dị na Turkey Karịa Ịgba Aka Ndị Agha." Zama taa, March 16. Nweta site na http://www.todayszaman.com/_part-1-islamic-scholar-gulen-calls-conditions-in-turkey-worse-than-military-coup_342261.html na 15August 2014.
Ebaugh, Helen Rose. 2010. Ugbo Gülen: Otu nyocha gbasara mmekọrịta nke ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu gbasaa. New York: Mmiri.
Esposito, John na Ihsan Yilmaz. 2010. Islam na Udo Owuwu: Gülen Movement Ihe omume. New York: Blue Dome Press.
Gallagher, Nancy 2012. "Ezigbo njem mmekọrịta na Turkey" Pp. 73-96 na Gülen Hizmet Movement na Omume ya: Ihe gbasara Ọmụma nke Altruistic Activism na Contemporary Islam, nke Pandya na Gallagher dere. Boca Raton, FL: Brown Walker Press.
Harrington, James. 2011. Ịgba Egwuregwu Na - enweghị Nkwupụta, Nnwere Onwe Okpukpe, na Democracy na Turkey: Nnwale Ọchịchị na Times nke Fethullah Gülen. Lanham, MD: University Press of America.
Hendrick, Joshua D. 2013. Gülen: Politics Ambiguous nke Market Islam na Turkey na Ụwa. New York: New York University Press.
Hunt, Robert na Alp Aslandoğan, eds. 2007. Ụmụ amaala Muslim nke World Globalized. Somerset. NJ: Ikwuputa Uhie.
Kinzer, Stephen. 2013. "Fethullah Gulen: Turkish Instructor and Islamic Scholar," TIME, April 18. Acessed si http://time100.time.com/2013/04/18/time-100/slide/fethullah-gulen/ na 17 August 2014.
Mardin, Şerif. 1989. Okpukpe na mgbanwe mmekọrịta mmadụ na Turkey n'oge a: Akwukwo Bediüzzaman kwuru Nursi. Albany: SUNY Press.
Pandya, Sophia na Nancy Gallagher. 2012. Gülen Hizmet Movement na Omume ya: Ihe gbasara Ọmụma nke Altruistic Activism na Contemporary Islam. Boca Raton, FL: Brown Walker Press.
Kwụsị, Jekọb. 2014. "Muslim Cleric Ejikọtara ya na Turkish Corruption Nyocha." Washington Post, January 17. Nweta site na http://www.washingtonpost.com/national/religion/muslim-cleric-linked-to-turkish-corruption-probe/2014/01/17/55698400-7fa8-11e3-97d3-b9925ce2c57b_story.html na 15 August 2014.
Rodrik, Dani. 2014. "Ebumnuche megide ndị isi." June. Nweta site na http://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Commentary/Plot-Against-the-Generals.pdf na 15 August 2014.
Sezgin, Ismail Mesut. 2014. "Agha Erdoğan megide Hizmet: Nzọụkwụ Nzọụkwụ." Taa Zaman, July 22. Nweta site na http://www.todayszaman.com/national_erdogans-war-against-hizmet-step-by-step_353694.html na 15 August 2014.
Tittensor, David. 2014. Oflọ Ọrụ: Gülen Movement na Thirdzọ nke Atọ nke Islam. New York: Oxford University Press.
Tuğal, Cihan. 2013. "Gülenism: Ụzọ Ochie ma ọ bụ Echiche Ochie." Jadaliyya, June 5. Nweta site na http://www.jadaliyya.com/pages/index/12673/gulenism_the-middle-way-or-official-ideology na 15 August 2014.
Turam, Berna 2006. Ọchịchị nke Njikọ: N'etiti Islam na Ala Ala . Palo Alto, CA: Ụlọ ọrụ University Press.
Yavuz, Hakan. 2013. Nye Islam Islam: Akwukwo Gülen. New York. Oxford University Press.
Yavuz, Hakan. 2003. Ọchịchị Islam nke Islam na Turkey. New York: Oxford University Press.
Yavuz, Hakan na John Esposito, eds. 2003. Turkish Islam na State State. Syracuse: Syracuse University Press.
Yurtsever, Ali, ed. 2008. Islam na oge nke ihe ịma aka zuru ụwa ọnụ: Ụzọ ọzọ nke ndị na-ahụ maka ndị omekome. Washington, DC: Rumi Forum / Tuğhra Books.
FETHULLAH GULEN NGBA NKE NWA